विदेश जान चाहने विद्यार्थीले मेला छुटाउँदैनन् – Arthik Awaj
विदेश जान चाहने विद्यार्थीले मेला छुटाउँदैनन्
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर २५ गते मंगलवार १२:२८ मा प्रकाशित
सचिव, इक्यान कास्की
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्कीले मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म पोखराको सहभागृहहलमा छैटौं संस्करणको इक्यान शैक्षिक मेला आयोजना गरेको छ । मेलाका बारेमा केन्द्रित रहेर इक्यान कास्कीका सचिव रुद्रप्रसाद अर्यालसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
इक्यान फेयरको तयारी कस्तो छ ?
इक्यान फेयरको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । स्टलहरु बनाइसकिएको छ । ती सबै स्टलहरु बुकिङ भएर सबैमा शैक्षिक परामर्श दिने सम्बन्धित एजुकेसन कन्सल्टेन्सी तयारी अवस्थामा छ । मञ्च तयार भइसकेको छ । अब उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी छ । प्रचार–प्रसार पनि राम्रो भएको छ । मलाई लाग्छ पोखरासहित कास्कीका सबै सर्वसाधारणले इक्यान फेयर बारे जानकारी पाइसक्नुभएकोछ । उहाँहरु पनि आउन आतुर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
इक्यान फेयरमा कस्ता–कस्ता स्टल रहन्छन् ?
इक्यान फेयरमा सबै शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित स्टलहरु मात्र रहन्छन् । जहाँबाट विद्यार्थी र अभिभावकले वैदेशिक शिक्षाबारे जानकारी लिन सक्नुहुनेछ । इक्यान फेयरका लागि हामीले पेभेलियन र ननपेभेलियन स्टलहरु बनाएका छौं । सबै गरेर ७० वटा स्टलहरु रहेका छन् । प्रायः सबै स्टलहरु ठूला र फराकिला छन् ।
इक्यान फेयर गर्नुको उद्देश्य के हो ?
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले देशभरी नै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । त्यस मध्येको यो इक्यान फेयर पनि एक हो । विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशमा रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई वैदेशिक शिक्षाबारे शैक्षिक परामर्श दिनका लागि हामीले इक्यान फेयर गरेका हौं । विद्यार्थी र अभिभावकहरु विदेशमा होस् वा स्वदेशमा । कहाँ के कस्तो शिक्षाको अध्यापन हुन्छ ? कुन विषय अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसको भविष्य कस्तो हुन्छ । कुन देशमा अध्ययन गर्न जाँदा त्यसको प्रोसेस कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अनभिज्ञ हुन्छन् । हो त्यसैको जानकारी गराउने थलो इक्यान भएकाले यो फेयर विद्यार्थी र अभिभावकका लागि एकदमै राम्रो अवसर हो ।
इक्यान फेयरका प्रमुख विशेषताहरु के–के हुन् ?
इक्यान फेयरको प्रमुख विशेषता भनेको एउटै छानामुनी इक्यान कास्कीसँग आबद्ध शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुले शैक्षिक परामर्श दिनु हो । हुन त कास्कीमै रहेको शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुले त हो नि इक्यान फेयरमा पनि परामर्श दिने भन्ने लाग्ला । तर कुनै विद्यार्थी वा अभिभावक कुनै एउटा शैक्षिक परामर्शदाता संस्थामा गएर परामर्श लिनु भनेको त्यो संस्थाले दिने सेवाको मात्रै जानकारी लिनु हो । तर यो फेयरमा एकै थलोमा विद्यार्थी र अभिभावकले कास्कीमा रहेका प्रायः सबै शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुको स्टलमा गएर तिनले दिने सेवाका बारेमा जानकारी लिन पाउनुहुन्छ । त्यतिमात्र होइन, यो फेयरका लागि भनेर ति शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले आफूले पठाउने देशमा रहेका कलेजका प्रोफेसर लगायतका विज्ञहरुलाईसमेत बोलाएर काउन्सिलिङ गर्दैछन् । त्यसैले यो एउटा सुवर्ण अवसर हो विद्यार्थी र अभिभावकका लागि ।
कुनै शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थामा जानु र फेयरमा गएर परामर्श लिनुमा के फरक हुन्छ ?
बास्तवमा हामीले इक्यान फेयरबाट दिने भनेको शैक्षिक परामर्श हो । यहाँबाट अरु काम गर्ने होइन । नितान्त शैक्षिक परामर्श दिएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई कुन देशमा कस्तो शिक्षा दिइन्छ । ती देशका कलेज तथा युनिभर्सिटी कस्ता कस्ता छन् ? तिनको शिक्षा कस्तो हुन्छ ? विदेशमा होस् वा स्वदेशमा त्यसको भविष्य कस्तो हुन्छ ? यस फेयरमा शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट काउन्सिलिङ गर्छन् । यसको मतलव यसले कसले राम्रो परामर्श दिने भन्ने भएकाले पक्कै पनि राम्रो भइहाल्छ । यसले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थालाई अझ सबल तथा स्वच्छ बन्नका लागि मद्दत पनि गर्छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई धेरै फाइदा हुन्छ । एउटा संस्थामा जाँदा एउटा संस्थाको बारेमा मात्र थाहा हुन्छ । अझ भनौं त्यस संस्थाले दिने सेवा मात्रै थाहा हुन्छ । तर इक्यान फेयरमा आउँदा एउटै थलोमा धेरै भन्दा धेरै शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाबारे जानकारी लिने, तिनले दिने शैक्षिक परामर्श लिने अवसर पाइन्छ । यसमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कन्सल्टेन्ट चुज गर्ने कसरी हो ? कस्तो खालका कन्सल्टेन्ट राम्रो हुँदो रहेछ ? विदेश जाँदा के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दो रहेछ ? विदेश जाँदा के–के कुराहरु बुझेर जानु पर्दो रहेछ भन्नेबारेमा पनि जानकारी पाउन सकिन्छ ।
फेयरका लागि विदेशबाट पनि सम्बन्धित कलेजका प्रतिनिधिहरु आउँदैछन् कि ?
सर्वप्रथमत शैक्षिक परामर्शदाताहरु हामी आफैमा आधिकारिक व्यक्ति हौं । हामीलाई सम्बन्धित देशको कलेज वा विश्वविद्यालयले अथोराइज्ड गरेको हुन्छ के–के इन्फरमेसन दिने भनेर । त्यो हामीले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाबाटै दिइरहेका हुन्छौं । तर यो इक्यान फेयरमा चाहीं विदेशबाट सम्बन्धित कलेजका फाउण्डरहरु, प्रोफेसरहरु, मार्केटिङ हेड तथा कलेज र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु आएर परामर्श दिने गर्छन् । यसले पक्कैपनि विद्यार्थी र अभिभावक बढी भन्दा बढी लाभान्वित हुनेमा शंकै रहेन । यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो ।
फेयरबाट विद्यार्थी र अभिभावक कसरी लाभान्वित हुन्छन् ?
एउटै छानामुनी धेरै देशका कलेजहरुबारे जानकारी लिनसक्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो विद्यार्थीका लागि । उनीहरुले आफू जाने देश र ती देशका कलेजहरुबारे जानकारी लिन पाउँछन् । ती देशका कलेजमा अध्ययन हुने विषयको भविष्यबारे परामर्श लिन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, विदेशका ती कलेजहरुमा अध्ययनका लागि जाँदा अपनाउनुपर्ने भिसा प्रोसेसहरु, त्यहाँ गइसकेपछि आउनसक्ने समस्याहरु, ती समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्छ ? भन्नेबारेमा पनि जानकारी लिएर भविष्यमा पर्नसक्ने खतराबाट जोगिनका लागि तयारी गर्न पाउँछन् । यसले विद्यार्थीको भविष्य उज्वल बनाउन र अभिभावकलाई हुनसक्ने जोखिमबाट पार पाउनका लागि सहयोग मिल्छ । त्यस्तै कुन कन्सल्टेन्सी कस्तो हो ? भन्नेबारेमा बुझ्ने मौका पनि हो यो इक्यान फेयर । इक्यान मेम्बरहरुबाटै शैक्षिक परामर्श लिदा विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देशपनि यसले दिन्छ ।
फेयरमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण कस्तो रहन्छ ?
विद्यार्थी र अभिभावकका लागि शैक्षिक परामर्श दिने उद्देश्यले आयोजित इक्यान फेयरको आकर्षण राम्रो हुनेछ । जो विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान चाहन्छन् वा जो अभिभावक आफ्नो छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउन चाहन्छन् उनीहरु सबै इक्यान फेयरमा आउँछन् । यसको मतलब इक्यान फेयरमा उनीहरुको आकर्षण छ । यो व्यावसायिक र मनोरञ्जनात्मक इभेन्ट नभएकाले लक्षित समूह भन्दा बाहिरबाट भने कम आउँछन् । तर विदेश जान चाहने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुले भने इक्यान फेयर छुटाउँदैनन् ।
प्रवेश निःशुल्क गर्नु भएको रहेछ किन ?
इक्यान फेयरको प्रवेश निःशुल्क छ । यो व्यावसायिक मेला होइन । यसबाट नाफा कमाउने उद्देश्य हाम्रो छैन । नितान्त विद्यार्थी र अभिभावक लाभान्वित हुन् भनेर हामीले यो आयोजना गरेका हौं । त्यसैले टिकट नराखेका हौं ।